Ny zava-drehetra momba ny saka Bengali | Noti saka
Ny saka Bengal na saka bengali dia volo mahavariana. Mampatsiahy ny leoparda ny fisehony; Na izany aza, tsy tokony hofitahina isika amin'ny fisehoany ivelany, satria manana ny toetran'ny saka saka sy mahafinaritra izy.
Karazana karazany vaovao izy io, nefa miha malaza hatrany. Ary io no izy, iza no tsy te hanana leoparda kely ao an-trano? Andao hianatra bebe kokoa momba azy.
1 Tantaran'ny saka bengali
2.1 Saka bengaly fotsy
3 Afaka velona firy taona ny saka Bengal na bengali?
4 Manao ahoana ny toetra?
5 Ahoana ny fikarakarana saka Bengal na bengali?
6 Ohatrinona ny saka bengal?
Tantaran'ny saka bengali
Ity saka tsara tarehy ity nipoitra ho toy ny lakilasy teo anelanelan'ny saka sy ny bibidia, hatramin'ny nanombohany toy ny hybrid an'ny saka leoparda aziatika (Prionailurus bengalensis) sy ny karazana saka saka hafa: Ocicat, Abyssinian, Shorthair anglisy ary ny Egyptianina Mau. Araka izany dia azo atao ny manana zana-dia madinidinika, fa miaraka amina toetra malala-tanana sy be fitiavana.
Tamin'ny taona 40 dia efa nisy saka Bengal tany Japon, fa ny karazany dia tsy nitombo raha tsy 20-30 taona taty aoriana, tany Etazonia, izay nanehoana voalohany azy ireo tamin'ny 1985. Nahasarika ny sain'ny olona izy ireo ka vetivety dia eken'ny ny International Cat Association (ICA).
Na eo aza izany dia misy ny fikambanana, toy ny CFA, izay tsy nanaiky azy ho toy ny karazany satria tsy manaiky hibrida. Bengalis amin'ny taranaka fahefatra ihany no afaka mandray anjara amin'ny seho ataon'izy ireo miaraka amin'ny tanjona hahatonga ny génétique bibidia halefaka kokoa. Fa ny marina dia misy ny mpiompy izay manohy mifantina santionany ary miampita azy ireo hanatsarana ny karazany; ary raha ny marina ankehitriny dia tsy ilaina intsony ny hiampita saka leoparda miaraka amin'ny saka an-trano.
Saka bengal eo amin'ny sezalava
Ilay saka bengali Biby lehibe izy io, milanja hatramin'ny 9kg amin'ny lahy, ary hatramin'ny 4kg an'ny vavy. Tena matanjaka sy hozatra ny vatana, arovan'ny volo fohy, malefaka ary matevina. Ny loha dia malalaka, boribory, manana maso maitso, sofina kely ary rambony matevina sy salantsalany.
Araka ny fenitra, tsy maintsy atao ny manana tendron'ny rambony mainty, kibony ary dian-tongotraNy palitao dia boribory fotsiny, ary ny loko fototra dia mety misy crème, volamena, voasary, ivoara, mavo na fotsy.
Saka bengaly fotsy
Sary - Amolife.com
Tadidinao matetika ny tigra albino, sa tsy izany? Io fijerena totohondry mampiavaka azy io, ilay toetra fahaleovan-tena izay raisiny rehefa milentika masoandro ... Ny saka bengal fotsy dia biby tsara izay ho lasa namana akaiky indrindra amin'ny fianakaviana manontolo ianao. Mazava ho azy, tokony ho fantatrao fa ny fotsy fotsy dia tokony hialana amin'ny fampandrenesana ny masoandro masoandro loatra, satria raha tsy izany dia mety ho voan'ny homamiadan'ny hoditra ianao raha tsy izany.
Afaka velona firy taona ny saka Bengal na bengali?
Raha mbola mahazo fikarakarana sahaza ianao, afaka miaina tanteraka 9 sy 15 taona. Mazava ho azy fa tsy maintsy mipetraka ao an-trano izy, satria raha avelantsika hivoaka izy, dia azo antoka fa hihena ny androm-piainany.
Manao ahoana ny toetra?
Ny saka bengaliana dia saka manokana. Izy dia tena manan-tsaina, be fitiavana ary tena mavitrika. Tiany ny milalao, mizaha, mianatra zava-baovao ary miaraka amin'ny fianakaviany.. Ankoatr'izay dia iray amin'ireo biby mampivelatra fatorana matanjaka amin'ny olona tokana izy na dia eo aza ny fitiavana ny olombelona rehetra ao an-trano.
Ankafiziny ny mitsambikina, mananika ary, na dia toa hafahafa aza, milomano, zavatra hainy tsara ny manao azy satria toetra nolovany tamin'ny saka leoparda aziatika io, izay tsy maintsy mihaza ny rembiny ao anaty honahona.
Ahoana ny fikarakarana saka Bengal na bengali?
Raha manapa-kevitra ny hiaina miaraka amin'ny saka Bengal ianao dia tokony hanome izao fikarakarana manaraka izao:
Isaky ny azo atao, tena ampirisihina hanome sakafo voajanaharyNa Yum Diet ho an'ny saka, na Barf (miaraka amin'ny fanampian'ny mpahay sakafo tototra). Ny sakafo izay hizaranao ny tsara indrindra sy izay hitondra tombony be indrindra ho anao, ary ireto no tena lehibe:
Nify mahery, salama ary madio
Fivoarana sy fampandrosoana tsara indrindra
Raha toa ka tsy afaka misafidy an'ity karazan-tsakafo ity ianao, ny safidy tsara hafa dia ny fanomezana sakafo izay tsy misy voam-bary na vokarina, toa an'i Applaws, Orijen, Taste of the Wild, ankoatry ny hafa satria tsy hiteraka olana aminao izany. Mazava ho azy, tokony ho fantatrao fa lafo ny kitapo 7kg: mety mitentina 40 euro mora foana izy io, saingy ny vola tokony homena dia ambany lavitra noho ny nanomezana sakafo mora kokoa satria misy proteinina biby be dia be.
Ny saka bengali dia saka miasa tokoa. Mila lalaovina isan'andro, imbetsaka. Fotoam-pivoriana telo na efatra maharitra 10-15 minitra dia hitazomana ny endrikao ary ho tony sy ho sambatra kokoa ianao.
Mety hahaliana be koa ny mampianatra azy hiara-mandeha aminy fiadiana. Raha tsy hainao ny manao azy dia aza manahy. Amin'ny Ity lahatsoratra ity Azavainay aminao izany.
Volo tsy maintsy kosehina indray mandeha isan'andro amin'ny karatra na tohotra mba hanala volo maty. Tsy ilaina ny mandro. Mandritra ny vanim-potoana famolahana dia tsara ny manome Malta hisorohana volo be loatra tsy hangonina eo amin'ny vavoninao.
Ny maso dia afaka diovina isaky ny 3-4 andro amin'ny alàlan'ny lamba madio (iray isaky ny maso) mando amin'ny fampidirana chamomile.
Ny sofina dia tokony hodiovina indray mandeha isan-kerinandro amin'ny gauze madio sy ny mason'ny dokotera voatondro. Tokony ampiana 1-2 latsaka ianao ary diovina amin'ny gauze ny lafiny ivelany indrindra amin'ny sofina tsirairay.
Toy ny saka rehetra, mandritra ny taona voalohany amin'ny fiainana dia ilaina ny mitondra azy any amin'ny vet ka apetrakao ny vaksiny ilaina and for manilika na mamono azy raha tsy mikasa ny hiteraka azy ianao.
Hatramin'ny taona sy isan-taona, dia soso-kevitra tsara ny hamerenana azy io mba hahazoana vaksiny fanentanana sy hijerena azy hahitana izay olana mety hitranga.
Ankoatr'izay, isaky ny miahiahy ianao fa marary dia tsy maintsy manatona mpitsabo manokana hitsaboana anao.
Ohatrinona ny saka bengal?
Raha tena te hiaina miaraka amin'ny saka Bengali ianao, ary mieritreritra fa vonona ny hanome ny fikarakarana rehetra ilainy mandritra ny androm-piainany dia tsy maintsy mieritreritra ianao fa vidin'ny alika kely manodidina ny 1500 euro novidina tamina famonoana.
Fantatray fa tianao izany, koa ndao hofaranantsika ity lahatsoratra ity amin'ny alàlan'ny fampidirana galeriana sarin'ny saka Bengali na Bengal:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » miteraka » Ilay saka bengali, volom-borona misy fijery bibidia sy fo goavambe
Ohatrinona ny daroka isaky ny iray minitra no mahazatra ny saka?